Rajadii badbaadinta markabkii M/S oo gabaabsiya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Markabkii Costa Concorida oo sii librahaya qarna looga baqayo. Foto: Filippo Monteforte/Scanpix
Rederiet ger inte upp hoppet att hitta överlevande
Rajadii badbaadinta markabkii M/S oo gabaabsiya
La daabacay måndag 16 januari 2012 kl 15.44
Shan rux oo u dhashay dalka Iswiidhanayaa kamid ahaa dadyoowgii uu la qalibmayy markabka raaxaysi ka bad-badis ah ee loogu magaca darey M/S Costa Concordia oo ku qalibantey xeeb ka mida xeebaha dalka Talyaniga. Jan iyo Ingalill Mosander waxaa labo ka mida shanaas qofood oo iyagu ku jirey gudaha muqaayad ka mida muqaayadaha ku taala markabka gudihiisa. Inger ayaa aad ugaga faalootey xaaladi ay kala kulantey marii ay si hubaala u ogaatey in markabka ay saaran tahay gadoomey, mareey u warameeysay telefishanka qaranka barnaamujkaAgenda.
- Sida xaqiiqdaa waxaan ku sugnaa cabsi badan, caruuro ayaa hareeraheeyga ka baroorana hayey, hooyooyin isku dhex daadsan ayaa hadba dhan u carara hayey dadbadana weey isbuurana hayeen si ay uga baxaan Markabka inteeysan ku dhiman.
Markabkan ayeey ku dhinteen tiro gaareeysa lix qofood inta la ogyahay, waxaana saarnaa daad lagu qiyaasay 4 000 ku waas oo 1 000 ka midhi ahaayeen shaqalaha Markabka. Dayoowgaas oo dhamaantood ahaayee dad ka soo jeeda Yurub ayeey ugu badnaayeen dadka ka soo jeeda Talyaniga, Jarmalka iyo Faransiiska.